चीनबाट १३ हजार मेडिकल सामग्री ल्याइयो
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी जहाजमार्फत चीनको ग्वाङजाओबाट मेडिकल सामग्री नेपाल ल्याइएको छ । औषधि उपचारजन्य सामग्री लिन निगमको वाइडबडी जहाज शनिबार दिउँसो
नमूना सङ्कलनको ४ दिनपछि मात्र कोरोना संक्रमणको पुष्टि, किन गरिन्छ ल्याब टेस्टमा ढिलाइ ?
भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं । नेपालमा पाचौं व्यक्ति १९ बर्षिय युवतीमा कोरोना भाइरस रोग संक्रमणको पुष्टि भएको छ । उहाँ कतार एयरको क्यूआर ६५२ एउटै जहाजबाट चैत ४ गते काठमाडौं आउनुभएको
अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात राख्न निर्देशन
न्युज अफ नेपाल, पाल्पा । पाल्पा जिल्लामा कोरोनाका कारण भइरहेको लक डाउनका कारण समस्या नआओस भनेर विभिन्न निर्णयहरु भएका छन । अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु आपूर्ती समिति पाल्पाले सम्वन्धित व्यवसायीहरुलाई
कोरोनाको मारमा परेपछि धमाधम कुखुरा मार्दै कृषक
कविराज नेपाल, पाल्पा । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर कुखुरा कृषकमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ । पाल्पामा कुखुरा पालन व्यवसाय गर्दै जीविकोपार्जन गरेका कृषकहरुले दानाको समस्या, कुखुरा बजारसम्म लैजाने
ईटा भट्टामा काम गर्ने ७ हजार ५ सय मजदुर घर फर्किए
न्युज अफ नेपाल, भक्तपुर । भक्तपुरका विभिन्न ईटा भट्टामा काम गर्ने ७ हजार ५ सय मजदुर घर फर्किएका छन् ।सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा पनि इटा भट्टाहरु संचालन भएपछि जिल्ला प्रशासन
पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गर्ने मेयर चिरीबाबु महर्जनको प्रतिबद्धता
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । अहिलेको कठिन परिस्थितिमा पनि ललितपुर महानगरपालिका ५ स्थित पाटन अस्पतालले नियमित सेवासँगै कोरोना संक्रमित बिरामीहरुलाई समेत जिम्मेवारीपूर्वक उपचार सेवा दिँदै आएको छ । अस्पतालमा आवद्ध
एकै विमानमा नेपाल आएका दुई जना कोरोना संक्रमित
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । बेल्जियमबाट नेपाल आएकी बागलुङकी एक युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको पुष्टि भएको छ । उनी चैत ४ गते कतार एयरवेजको ‘क्यूआर ६५२’ विमानबाट नेपाल आएकी
कोरोनाको त्रासमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा २० खर्ब बराबरको आर्थिक प्याकेजमा हस्ताक्षर
भगवती तिमल्सिना, काठमाडौँ । कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण अन्य मुलुकमा भन्दा अमेरिकामा धेरै मानिस संक्रमण भएका र उपचारका लागि आवश्यक उपकरण, स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी समेत नभएको र भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको स्वास्थ्य प्रति
कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न घरमै बस्न प्रचण्डको आग्रह (भिडियोसहित)
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोभिड–१९ को संक्रमणका बेला अग्रपंक्तिमा रहेका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने
अख्तियारका प्रमुख आयुक्तसहित दुईको तलब कोरोना रोकथाम कोषमा
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे र दुई आयुक्तहरु डा. गणेशराज जोशी र डा. सावित्री थापा गुरुङले आफ्नो तलब सरकारले स्थापना गरेको कोरोना
इस्लामाबाद (एजेन्सी) । जम्मु काश्मिरबाट भारतले अनुच्छेद ३७० हटाएपछि सायदै कुनै दिन होला, भारत पाकिस्तानबीच गोलाबारीको समाचार नआएको । तर गत हप्ता अटारी बोर्डरमा भारत पाकिस्तान दुबै देशको सरकारले एक
मेडिकल सामग्री लिन वाइडबडी चीनतर्फ
न्युज अफ नेपाल, काठमाण्डौँ । मेडिकल सामग्री र औषधी लिन नेपाल एयररलाइन्सको वाइडबडी विमान आज चीन गएको छ । मेडिकल सामग्री लिनका लागि वाइडबडी विमान आज दिउँसो साढे १२ बजे
ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो नेपाल एयरलाइन्सको विमान
न्युज अफ नेपाल, बाँके । नेपाल एयरलाइन्सको वाई १२ विमान नेपालगन्ज विमानस्थलमा ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्तिको स्याम्पल लिन काठमाडौ‌ंँबाट आएको सो विमान अवतरण
विपन्नको चुल्हो बाल्दै प्यूठानका स्थानीय सरकार
सलिम अन्सारी, प्यूठान । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले जारी गरेको लकडाउन पछि समस्यामा परेका ज्यालादारी मजदुरलाई प्यूठानका स्थानीय तहले खाद्यान्न दिने भएका छन्। दैनिक ज्यालादारीमा
उपचारमा खटिने कर्मचारीलाई २० लाखको बिमा
शिक्षा पन्त, लमजुङ । लमजुङको मस्र्याङदी गाउँपालिकाले नोवेल कोरोना भाइरस विरुद्धको स्वास्थ्य उपचारमा खटिने कर्मचारीका लागि प्रति कर्मचारी २० लाख रुपैयाँको जीवन बिमा गर्ने भएको छ । उपाचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी,
रसिया पनि ‘लकडाउन’
मस्को, (एजेन्सी) । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशसंगै शनिवारदेखि रसियामा पनि कोरोना भाइरस फैलिन नदिने ‘एकसाता लामो काम बन्द’ (लक डाउन) शुरु भएको छ । सरकारले जनतालाई आ-आफ्ना घर भित्र बस्न
क्वारेन्टाइनका लागि सहयोग जुट्दै
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । कोभिड १९ को संक्रमण आशंका गरिएका वा संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको सम्पर्कमा पुगेका ब्यक्तिहरुका लागि तयार गरिएको क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीको सहयोग जुट्दै गएको छ ।
आपुर्ति सहज बनाउन कार्ययोजना
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । कोभिड १९ को संक्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनका कारण जिल्लामा अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको आपुर्ति सहजताका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी विशेष कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
कोरोना कोषमा सिद्धार्थ बैँकको १० लाख सहयोग
न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा । बागमती प्रदेश कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा सिद्धार्थ बैंकले १० लाख रकम सहयोग गरेको छ । बैंकका हेटौंडा शाखा प्रमुख अर्पण सन्जेलले
अबदेखि कोरोनाको सरकारी सूचना नयाँ वेब साइटबाट
न्यूज अफ नेपाल, काठमाडौँ । सरकारले कोरोना बारे जानकारी दिने नयाँ वेब पोर्टल एप्लिकेशन शनिबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामको कामलाई व्यवस्थित गर्न शनिबारदेखि डाँफे हेल्थ डटकम